Ciyaaryahankii ugu horreeyey kubadda cagta ee Shiinays ah oo ka ciyaara Yurub oo laga helay caabuqa Coronavirus – Gool FM
Lionel Messi oo dhaawac ku seegay tababarka iyo warar is qilaafsan oo ka soo baxaya xaaladdiisa
Maxay ahayd sababtii uu Bruno Fernandes la ooyay markii uu ku biiray Kooxda Manchester United?
Kabtan Sergio Ramos oo doonaya inuu horay u dhaqaaqo oo uu ku guuleysto horyaal kale oo La Liga ah
Ciyaaryahankii ugu horreeyey kubadda cagta ee Shiinays ah oo ka ciyaara Yurub oo laga helay caabuqa Coronavirus
Haaruun March 21, 2020
(Barcelona) 21 Mar 2020. Sida wararku ay sheegayaan ciyaaryahankii ugu horreeyey kubadda cagta ee u dhashay Waddanka Shiinaha ayaa laga helay caabuqa Coronavirus, iyadoo laacibkan uu ka ciyaaro dalka Spain.
Xiddiga Kooxda Espanyol ee Wu Lei ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horreeyey kubadda cagta ee Shiineys ah oo laga helay cudurka dunida sida weyn ugu faafaya ee coronavirus.
Wu Lei, kaasoo horyaalka La Liga u ciyaara naadiga Espanyol ayaa noqday ciyaaryahanka kaliya ee Shiineys ah oo kubadda cagta ciyaara shanta horyaal ee ugu waa weyn qaaradda Yurub oo noqday xirfadihii ugu horreeyeeyey kubadda cagta ee u dhashay Shiinaha oo laga helay COVID-19.
Xiriirka kubadda cagta Shiinaha ayaa sii daayey bayaan rasmi ah oo ay ku xaqiijinayaan in Wu Lei uu ka mid noqday lix ciyaaryahan iyo shaqaalaha kale ee naadiga Espanyol kuwaasoo laga helay caabuqa Coronavirus.
“Sida ay innagu soo war-gelisay Kooxda RCD Espanyol, ciyaaryahanka xulka qaranka Shiinaha ee Wu Lei ayaa la xaqiijiyay inuu ku dhacay cudurka loo yaqaan Coronavirus.”
“Ciyaaryahanku wuxuu leeyahay astaamo sahlan oo waxaa la siinayaa daaweyn.”
Kooxda FC Sion oo sabab yaab leh u ceyrisay xiddigii hore Arsenal ee Alex Song iyo Johan Djourou
"Coutinho wuxuu is weydiinayaa sababtii uu ugu biiray Barcelona" – Emanuel Petit